कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति वा सामान छुँदा करेन्ट लागेजस्तो किन हुन्छ ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति वा सामान छुँदा करेन्ट लागेजस्तो किन हुन्छ ?
विराटनगर/कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति वा कुनै पनि सामान (इलेक्ट्रोनिकका सामानबाहेक) छुँदा करेन्ट लागेको वा झट्का लागेको महसुस हुनसक्छ ।
यसलाई स्ट्याटिक करेन्ट भनिन्छ र अधिकांश मानिसले यसप्रकारको झट्का महसुस गरेका हुन्छन् । यो धेरैजसो जाडोको मौससमा महसुस हुने हुन्छ । वरपर देखिने सबै चिज एटम भनिने तत्त्वको संरचनाबाट बनेको हुन्छ । सकारात्मक चार्ज गरिएको प्रोटोन, नकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रोन र निउट्रल न्युट्रन समावेश भएको एटमलाई आँखामार्फत देख्न सकिँदैन ।
धेरैजसो समय, एटम निउट्रल रहन्छ, यसको मतलब यसमा समान सङ्ख्याको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ । तर, जब एउटा एटमसँग असमान सङ्ख्यामा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छन्, इलेक्ट्रोन उत्साहित हुन्छन् । जब एक व्यक्ति वा कुनै वस्तुसँग अतिरिक्त इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसले एक नकारात्मक चार्ज सिर्जना गर्छ । यी इलेक्ट्रोन अर्को वस्तु वा व्यक्ति र यसको विपरीतको सकारात्मक इलेक्ट्रोनमा आकर्षित हुन्छन् ।
प्रायः ती इलेक्ट्रोनको द्रुत चालको परिणाम कारण हामीलाई झट्का लागेको महसुस हुन्छ । वा, शरीरमा इलेक्ट्रोन चार्ज बढ्दै जाँदा व्यक्तिको छालामा त्यो जम्मा हुँदै जान्छ । र, सकारात्मक चार्ज भएको अर्को कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई छुनेबित्तिकै त्यसमा ट्रान्सफर हुन्छ र करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ । यसमा मौसम पनि जिम्मेवार हुने मानिन्छ ।
चार्ज प्रायः जाडोमा वा वरपरको मौसम सुख्खा हुँदा गठन हुन्छ । हावा सुख्खा हुँदा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग छालाको सतहमा विकसित हुन्छन् । गर्मीको समयमा, हावामा हुने मोइश्चरले नकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रोनलाई मेटाउँछ जसकारण गर्मीमा बिरलै यसप्रकारको झट्का महसुस गरिन्छ ।